कलाकार सस्तो लोकप्रियताका लागि नाङ्गिन्छन्
कुमार पुन, गायक
कुमारजी बेलायत कहिले र कस्को निमन्त्रणामा आउनुभयो ?
म्याग्दी देवीस्थान समाज युकेको कार्यक्रमका लागि आएको हुँ। म पहिलो पटक १ जुन २०१७ का दिन मगर संघ युकेको कार्यक्रममा आएको थिएँ ।
बेलायतको कुन÷कुन ठाउ“मा आफ्नो कला प्रस्तुत् गर्नुभयो ?
मैले युकेमा गरेको पहिलो कार्यक्रम स्यान्डर्स कम्युनिटी हलमा हो । अबको मेरो कार्यक्रम २९ तारिख मोना युके र ५ तारिख पाल्पाली समाज युके, ६ तारिख एक युके १२ मा डिएफ युके, १९ मा विम समाज युके, २० तारिख पुन समाज युकेका अनि २७ तारिख थकाली समाज युकेको आयोजनामा हुनेछ ।
तपाई कहिलेदेखि सांगीतक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको हो ?
सानैदेखि गाउनमा रुचि राख्ने र गाउने पनि गरें । धेरै मेला महोत्सवमा पनि दोहोरी गाएर हिँडें । बीचमा १८ वर्ष जति परदेशी जीवन बिताउन बाध्य भएँ । र, अहिले ३ वर्ष भयो म गायन क्षेत्रमा लागिपरेको छु ।
कहिलेदेखि तपाईलाई लोकगायक कुमार पुनको नामले श्रोता तथा दर्शकहरुले चिन्न थाले ?
जब मैले ‘लाछा डोरी उनको औधी सुनको...’, भन्ने गीत बजारमा निकालें । त्यसपछि मलाई पछाडि फर्कनु परेको छैन । र, मलाई कुमार पुन भनेर चिनाउने गीत नै यही हो । यही गीतकै कारण जापान, कोरिया, हङकङ, फ्रान्स, थाइल्यान्ड आदि देशहरुमा कार्यक्रम गर्न पुगें ।
के गरियो भने लोकभाकाको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुनसक्छ ?
विशेष गरेर कुमार पुनलाई मौलिक गायक भनेर चिन्छन् । मलाई हराउँदै जान लागेको मौलिक गीत गाउन मन लाग्छ । आजभोलि सस्तो लोकप्रियताको लागि नाङ्गीना पनि थालेका छन् । मलाई मन पर्दैन । गीत गाउने र सुन्नेले पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी थान्छु ।
कार्यक्रमका लागि देश, विदेशमा घुम्नुभयो, नेपाली लोकसंगीतलाई माया गर्ने कता बढी पाउनु भयो ?
नेपालमा भन्दा विदेशमा धेरै माया गरेको देखिन्छ ।
तपाईले कतिवटा गीतहरु श्रोता तथा दर्शकबीच ल्याइसक्नु भयो ?
मैले अहिलेसम्म ८ वटा एल्बम निकालें र अरुको गीतमा लगभग १५÷१६ वटा एल्बममा स्वर दिएको छु ।
गाउने प्रेरणा कहाँबाट पाउनुभयो ?
मलाई यो क्षेत्रमा ल्याउनमा वरिष्ठ गायक पुरुषोत्तम न्यौपाने अनि वरिष्ठ सर्जक रमेश बिजीको ठूलो हात रहेको छ ।
अन्तमा सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरुलाई धेरै धन्यवाद अनि नमस्कार । साथै मेरो दुई÷चार शब्द राखि दिने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद ङ